Dermatology | MyanCare
Child Care Call Center
Telenor Zay Program
Glow Skin လေးရအောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့ မုန်လာဥနီ
by myatlynn | Aug 7, 2020 | Dermatology
နေ့စဉ်ကျွန်မတို့ စားသောက် အသုံးပြုနေကြတဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲက ပစ္စည်းတွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ကောင်းကောင်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ ယုံမှားဖွယ်မရှိပါဘူး။
ရှေးလူကြီးသူမတွေရဲ့ အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာဆိုတဲ့ စကားပုံကို နားရည်ဝနေတဲ့ ကျွန်မတို့ မျိုးဆက်တွေဟာ အခုအချိန်အထိ အစားအသောက်တွေ၊ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဆေးဖက်ဝင်မှုတွေကို လေ့လာသင်ယူနေရဆဲပါပဲ။
ဒီကနေ့မှာတော့ လှပချင်ကြတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် အသားအရည်လှဖို့အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ မုန်လာဥနီအကြောင်းကို ပြောပြပေးပါမယ်နော်.မုန်လာဥနီမှာ
vitamin A and C တို့ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေလှပဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်တဲ့။
မုန်လာဥနီကို ဖျော်ရည်လုပ်သောက်တာ ဒါမမဟုတ် နေ့စဉ်အစားအသောက်တွေထဲမှာ ထည့်စားပေးတာတွေလုပ်ရင် ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ Glow Skin လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း လက်တို့လိုက်ပါရစေနော်..
MyanCare Application ကို စမတ်(Smart) ကျကျ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့ရက်တိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါ။
ဆံပင်တွေ ထပ်မကျွတ်အောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ
ဆံပင်ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တွေလို မိန်းမသားတွေတင်မကဘဲ ၊ အမျိုးသားတွေရော တယုတယ ပြင်ဆင်တတ်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ ။ ဆံကေသာရဲ့ ကောင်းခြင်း ဘာညာသာရကာ စတာတွေဟာ ကိုယ်တွေ ငယ်ငယ်ကတည်းက နားရည်ဝနေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ ။ ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်ကို ဆံပင် အချောင်းတစ်ရာနီးပါးလောက် ကျွတ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီလို ကျွတ်တတ်ပေမယ့် ပြန်လည်ရှင်သန်လာတဲ့ ဆံပင်အသစ်တွေကြောင့် လူတွေကိုယ်တိုင် ဒီလိုဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ကို ဂရုမထားမိကြပါဘူး ။ တကယ်လို့ပုံမှန်ထက် ဆံပင်ကျွတ်တာတွေ ၊ဆံပင် မြန်မြန် မပေါက်တာတွေလည်း ဖြစ်လာရော လူတွေက ဆံပင်အရမ်းကျွတ်တယ် ဆိုတဲ့ ပြဿနာကို စာဖွဲ့ပြောလာကြတော့တာပါပဲ။
ဆံပင်ကျွတ်ရခြင်းက အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဟော်မုန်းတွေပြောင်းလဲတာ၊ ရောဂါတွေကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်တာ ၊ ဓာတ်ကင်ကုထုံးတွေကြောင့် ၊ စတဲ့ အကြောင်းအရာပေါင်းများစွာကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ ပြဿနာကို ကျွန်မတို့တွေရင်ဆိုင်နေရဆဲပါ။ ဆံပင်ကျွတ်တတ်သူတွေ အတွက် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်စေတဲ့ အဖြေကတော့ ဘာ့ကြောင့်ဆံပင်တွေကျွတ်ရသလဲဆိုတာကို တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဆံပင်ကျွတ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ကုသနိုင်ဖို့ အိမ်တွင်းကုထုံး တွေ ၊ Rogaine လို ဆံပင်ပြန်လည်သန်စွမ်းမှုကုထုံးတွေ ကို ပြုလုပ်တာတွေ ကို လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲတာ၊ကျန်းမာရေး နဲ့ ညီအောင် နေထိုင်တာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုကင်းအောင် နေထိုင်တာတွေက သင့်ကို ဆံပင်တွေထပ်မကျွတ်အောင် အကူအညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
ကလေးလေးတွေရဲ့ အရပ်ကို ဘယ်လိုကြိုတွက်ကြမလဲ
အိမ်တွင်းရေးအဆင်မပြေတဲ့ မိသားစုထဲက ကလေးတွေ
မိခင် နို့တိုက်ခြင်းနှင့် ကောင်းကျိုးများ
Archives Select Month August 2020 (102) July 2020 (2)
Categories Select Category COVID-19 (5) Child Health (81) Aesthetic (1) Dental Article (1) Dermatology (2) ENT (1) Nutrition (2) OG (4) Psychology (1) Reproductive (6)
Healthcare should be simple, fast and uncomplicated. MyanCare makes it easy to visitadoctor in minutes through our mobile app, online and by phone.
Get access to quality healthcare without ever leaving your home, your job or wherever you are. Find out how easy it is to receive affordable, quality care without traveling to the doctor’s office!
Download MyanCare App